Ikhaya / Blog / Ubusika Bufikile! Ngaba ndifanele ndiyithenge i-Thermostatic Shower? Mamela kwiiNgcali, akumangalisi ukuba abantu abaninzi bafune ukutshintsha !!!
2021 / 01 / 15 uhleloBlog 6876 0
Isikolo soShishino lokuhlambela i-2020-11-19
Ukubhekisa kwimingxunya ekuhlangatyezwane nayo kwindawo yokuhlambela ukusuka ebuntwaneni ukuya ebuntombini, kubuhlungu ukuthetha ngaphezulu.
Kwishawari kwafunyaniswa ukuba akukho manzi ashushu!
Ngapha koko, umbuzo wokugqibela ngulo: Kutheni kunzima ukuhlamba kamnandi?
Ukuthi ishawa, enyanisweni, ilula kakhulu, kubandakanya intonga, itompu, umlomo owahlulwe wangaphezulu kunye nokutshiza ngesandla.
Kodwa abanye abantu bathi, ndichithe i-yuan elishumi ukuthenga into elungileyo. Ishawa yophukile, emva koko yenze ishawa entsha, kwaye awonzakalisi. Logama nje unokuyihlamba icocekile.
Ke, akukho nto iphosakeleyo, kodwa amava ekugqibeleni awafani.
Kufana, iisenti ezingama-50 zee-buns ezine-steamed, ungatya ngokwaneleyo, amawaka e-yuan yaseMichelin nawo atya ngokwaneleyo. Zombini zihluthi, uthanda ukutya ntoni?
Isitshixo asikho kwiziphumo, kodwa kukonwaba kwenkqubo. Namhlanje siza kuthetha ngeshawa ~
Nye. Iindidi zeeShowerheads
Ngokubanzi, zimbini iintlobo eziphambili zeentloko zeeshawari kwintengiso ngoku: thermostatic kunye nesiqhelo. Ekuthengweni kwezinto ezininzi ezidla ngokungazithembi, andazi nokuba bakhetha ishawa yeshushu okanye ishawa eqhelekileyo. Nguwuphi umahluko phakathi kwezi zimbini?
Ishawa yesiqhelo, isiseko sayo sisiqwenga se-ceramic se-thermostatic spool, ngokujija ujikeleze ukulungelelanisa iqondo lobushushu lamanzi, ujike uye ezantsi ukulawula ukuhamba kwamanzi. Kuyinto elula kakhulu kwaye iyakhawuleza ukusebenzisa.
Kodwa uhlala usebenzisa ishawa uza kufumana ingxaki, kwishower yasebusika, kunzima ukulawula ubushushu bamanzi kubushushu obuthile. Kungenxa yokuba itepu eqhelekileyo yokuhlambela kukuxuba amanzi abandayo kunye namanzi ashushu ukulungisa ubushushu bamanzi. Nje ukuba uxinzelelo lwamanzi ashushu okanye abandayo lwamanzi luguquke, ubushushu bamanzi ngokwendalo buya kuba bungazinzi kwaye bushushu kwaye bubande.
Kunye neshawa ephuculweyo ye-thermostatic, i-spool inokuhlengahlengiswa ngumbhobho kunye ne-thermostat yayo. Ibhalansi ezenzekelayo yoxinzelelo lwamanzi abandayo kunye ashushu, ukuze kugcinwe uzinzo lobushushu bamanzi.
Ukusuka kwindawo yokujonga ukhuseleko, iqondo lokushisa eliqhelekileyo lokuhlamba kunzima ukulilawula. Ukuhlanjwa kwabantu abadala kulungile, bayakwazi ukuphendula ngexesha elifanelekileyo. Ukuba ngaba ngabantu abadala okanye abantwana bayahlamba, kulula ukuba batshiswe ngeziphumo ezibi.
Ishawa yeThermostatic inokucwangciswa kubushushu bemilinganiselo ezenzekelayo, ngaloo ndlela kuncitshiswe amathuba okuba isikali sikhanye. Kwaye udonga lwangaphakathi lwetephu lwalwenza unyango lwe-scald. Nokuba ngempazamo uchukumise itepu, awuyi kutshiswa, ukuphucula ukhuseleko kwishawari.
Ukongeza, ishawa inokuhlulwa kwakhona kwisitya esiphathwayo, ishawa yokutshiza ephezulu kunye neshawa yokutshiza esecaleni ngokusetyenziswa.
Iishawari ezigcinwe ngesandla zezona zixhaphakileyo kunye nezona zinto zixabisekileyo. Usapho ngokubanzi luthi ishawa, ihlala ibhekisa kwishawari ebanjwa ngesandla. Le ishawa kulula ukuyisebenzisa, ingahlamba onke amalungu omzimba, kunye nesihlalo esisigxina, nayo inokufezekisa umsebenzi weshawa yokutshiza ephezulu, engabizi mali ininzi.
Ngoku ngakumbi nangakumbi amakhaya afakelwe ishawa yokutshiza ephezulu. Ubungakanani beli shawa bukhulu, ngokubanzi kwii-intshi ezingaphezu kwe-8, ubude nobubanzi bunokuba ngaphezulu kwemitha enye. Ishawa yokutshiza ephezulu inokufikelela kwimvula, inkungu yamanzi kunye nokunye ukuphuma kwamanzi, ukuze umsebenzisi afane nokuba kwindalo, azive echukumiseka kakhulu emanzini.
Side Chela Ukuhlamba
Ishawa yokutshiza ecaleni kufuneka ilungiswe eludongeni, ukutshiza amanzi kwicala, iipropathi zayo ezincedisayo zikhulu, ikakhulu ukufezekisa umsebenzi wokuthambisa. Elinye icala leshawa lokutshiza linokuhlengahlengisa i-engile ukufezekisa kunye nokuhla, ngasekhohlo nangasekunene okanye ngokungaqhelekanga kokukhutshwa kwamanzi, unokuhlamba kunye nokuthambisa umzimba wonke. Ishawa yokutshiza ecaleni ayithengiswanga ngokwahlukeneyo, ihlala ithengiswa njengenxalenye yenkqubo yokuhlamba efihliweyo okanye iseti yeshawari.
Okwesibini, indlela aManzi aPhuma ngayo kwiShower
Njengoko igama lisitsho, amanzi endalo ngamanzi atshizwe ngendlela yendalo, ngaphandle konyango. Ukutshizwa kwimingxunya yokuhlamba i-silicone, amanzi ngokwawo ngoxinzelelo oluthile, unokuhlamba umzimba wonke, yeyona ndlela ixhaphakileyo yamanzi.
Amanzi eBlue Bubble
Kukho iindawo zokuphumla zomoya kwindlela yamanzi ngaphakathi kwishower. Ukuhamba ngesantya esiphezulu kwamanzi kuqhuba ukuhamba komoya kunye nokudibanisa ukwenza ikholamu yamanzi. Ijika amanzi okutshiza okuqala abe ngamanzi avuza amanzi. Amanzi eblue agcwele kwaye athambile. Emva kokuba amanzi egqobhoza emzimbeni, amaqamza amancinci ashiyekileyo emzimbeni ayaqhubeka nokudubula, azise ukuphola okupholileyo.
Ukucoca amanzi kukuhamba kwamanzi okungena kumngxunya wamanzi wokuthambisa. Umngxunya wokuthambisa unerotor enokujikwa. Irotor iqhutywa yimpembelelo yokuhamba kwamanzi kwaye ijikeleza ngesantya esiphezulu ngaphakathi kwishawari, ivelisa iimpompo zamanzi ngokusika inxenye yokuhamba kwamanzi rhoqo. Ukubhabha okunjalo kwamanzi ukubetha emzimbeni ukuze udlale indima yokuthanjiswa, ebizwa njalo ngamanzi okuphulula.
Tshiza amanzi kungenxa yokuba umngxunya wokutshiza kwipaneli uyilwe ngokukodwa. Ukuhamba kwamanzi ngenkungu kuyaphuma. Amanzi enkungu anendawo enkulu, kwaye ukuba senkungwini yamanzi kunika umbonisi amava ahlukileyo.
Eyona nto ibonwa kwintloko yentloko yeeshawari, umgaqo kukutshintsha umngxuma wokuphuma wamanzi ube sisiqwengana. Amanzi atshizwa ukusuka kumngxunya wokuqala obhityileyo kungene ukuphuma komcu. Abantu bemi ngaphantsi ngokungathi ingxangxasi yendalo yamanzi ezantsi ukuziva.
Eminye imvula ayinakutshintsha kuphela phakathi kweendidi zamanzi, kodwa ngeendlela ezimbini nangaphezulu ngaxeshanye. Umzekelo, amanzi endalo anamanzi ebubble yeyona ndlela ixhaphakileyo yokuxuba amanzi.
Okwesithathu, Umgangatho wokuhlamba
Xa ukhetha ishawa akufuneki wenze uvavanyo lwamanzi, kuphela ngamehlo nochukumiso lwesandla. Iindawo eziphambili zokutshekisha ziimigangatho yeenkozo zesilicone, kunye nesingxobo.
Xa uthenga ishawa ebanjwa ngesandla, nikela ingqalelo ngokukodwa kumngxuma ophuma kuwo amanzi. Umgangatho wendawo yokuphuma umisela ukuba ngaba ikholamu yamanzi efafazwe kwisitya ilinganisiwe, kunye okanye ngaphandle kobunzima bemeko. Isango lamanzi leshawa ngokubanzi lenziwe nge-silicone. Umngxuma ophuma kumgangatho wamanzi ucocekile, ugudile kwaye uthambile. Le ngqolowa yesilicone ayinakuqinisekisa kuphela umgangatho wokuphuma kwamanzi, kwaye icocekile ngaphandle kononophelo.
Umthungo weshawa yeyona nto ibonakalisa "ubugcisa" bendawo. Umthungo olungileyo kufuneka uqiniswe kwaye umsantsa kufuneka ube mncinci, ukuze kuthintelwe ngokufanelekileyo ukuvuza kwamanzi kunye nokuqinisekisa umgangatho wemveliso.
Umphezulu wesingxobo ngumlinganiso wokuhlala kweshawa okanye hayi. Indawo elungileyo yokugungxula igudile, ngaphandle kwamanqaku amahle, kwaye ayizukuziva bumpy xa uchukunyiswa. Xa uthenga, ungabeka ishawa phantsi kwesibane kwaye uyiqwalasele ngononophelo. Ukuba ufumana imikrwelo okanye ukungalingani, ubomi benkonzo yeshawari nayo iya kuncitshiswa kakhulu.
Okwesine, iZakhono zoKhetho lweShower
Jonga umphumo wokutshiza
Ukusuka ngaphandle, imilo yeshawari ibonakala ifana. Ukukhetha kufuneka kujonge umphumo wokutshiza, ishawa elungileyo inokuqinisekisa ukuba umngxunya ngamnye wokutshiza wokufafaza ulungelelene kwaye awuhambelani. Kuxinzelelo lwamanzi olwahlukeneyo, inokuqinisekisa isiphumo esigudileyo sokuhlamba Xa ukhetha, ungavavanya amanzi ukuze ubone ukuba ijet yamanzi ilungile na.
Jonga indlela yokutshiza
Uyilo lwangaphakathi lweentloko zeeshawari ziyahluka. Kukhetho lweshawari ephathwa ngesandla, ukongeza kwisiphumo sayo sokutshiza, indlela yokutshiza yesiphatho ngesandla nayo ine-surge, massage, ngokwahlukeneyo. Indlela yokutshiza ngokubanzi inokuzisa ubumnandi bokuhlamba ngakumbi. Ishawa egcinwe ngesandla inokuchongwa ngokungqinelana nemowudi yendlela efanelekileyo yokutshiza: uhlobo lwendalo nolumnandi lweshawa, uhlobo lokuthanjiswa okunempilo, uhlobo lokutshiza olufudumeleyo nolufudumeleyo, uhlobo lwekholamu egudileyo kunye ethambileyo, okonga amanzi wohlobo lwethontsi.
Jonga kwiCeramic Valve Core
Isiseko sevalve sichaphazela ukusetyenziswa kwemvakalelo yokuhlamba kunye nobomi benkonzo. Ishawa efanelekileyo isebenzisa isitya se-ceramic, egudileyo kunye nochuku. Ekukhetheni kwezandla kunokujija iswitshi, uzive ukhululekile, ucocekile ukuqinisekisa ukuba imveliso esetyenziswayo ukugcina ukusebenza kakuhle nokuthembekileyo.
Jonga umphezulu wesingxobo
Ukuhlamba ishawa kulungile okanye kubi, ukongeza kuchaphazela umgangatho kunye nobomi benkonzo, kodwa kuchaphazela nococeko oluqhelekileyo lokucoca. Ukuhlamba ngokubanzi kungaphezulu kwesingxobo se-chrome. Nesingxobo Good kunokugcinwa 150C ° lobushushu eliphezulu kangangeyure e-1, akukho ngamadyungudyungu, akukho mibimbi, akukho ngozi nokuxobuka isenzeko. Uvavanyo lweeyure ezingama-24 lwe-acetic acid yetyuwa alonakalisi. Kukhetho kunokubonwa kubengezela kunye nokuthamba, ishawa eqaqambileyo egudileyo ibonisa ukufana okufanayo, umgangatho ongcono.
Ubusika bulapha, khawuleza ufumane iseti yeshawa ye-thermostatic, ekhaya unokwenza yonke imihla i-SPA!
Ngaphambili :: Yila igumbi lokuhlambela ekhaya ukuze ube Mhle kwaye ube neMood elungileyo kwiShower Yonke imihla next: Nokuba igumbi lokuhlambela lingaphantsi kweemitha ezi-5 zesikwere, indawo emanzi kunye neyomileyo ayinzima ukundoyisa!
2021 / 02 / 04 5139
2021 / 01 / 16 6934
Uyilo kwigumbi lokuhlambela ekhaya ukuze ube Mhle kwaye ube neMood elungileyo eShowe ...
2021 / 01 / 11 7955